လဲမှို့ Twill ထည်ရောင်းချ - 300GSM
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 300g / မီတာ? (8.5oz) မျိုးကိုရက်: 3X1Twill အကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်: 10x10 80x45 အကျယ်: အဝတ်အစားဟာယူနီဖောင်းန်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့: 60 ° C တွင်ရေဆေးစရာစက်မှုတာဝန်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%) 145 / 150cm အသုံးပြုမှုကိုရည်ရွယ် အရောင်ကြာရှည်ခံမှုကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလက်မှတ်: မာခ် 340 အရောင်များ: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
လဲမှို့ Twill ထည်ရောင်းချ - 275GSM
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 275g / မီတာ? (8.1oz) မျိုးကိုရက်: 3X1Twill အကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်: 16x12 108x56 အကျယ်: အဝတ်အစားဟာယူနီဖောင်းန်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့: 60 ° C တွင်ရေဆေးစရာစက်မှုတာဝန်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%) 145 / 150cm အသုံးပြုမှုကိုရည်ရွယ် အရောင်ကြာရှည်ခံမှုကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလက်မှတ်: မာခ် 340 အရောင်များ: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
လဲမှို့ Twill ထည်ရောင်းချ - 250GSM
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 250g / မီတာ? (7.37oz) မျိုးကိုရက်: 3X1Twill အကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်: 20x12 112x56 အကျယ်: အဝတ်အစားဟာယူနီဖောင်းန်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့: 60 ° C တွင်ရေဆေးစရာစက်မှုတာဝန်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%) 145 / 150cm အသုံးပြုမှုကိုရည်ရွယ် အရောင်ကြာရှည်ခံမှုကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလက်မှတ်: မာခ် 340 အရောင်များ: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
လဲမှို့ Twill ထည်ရောင်းချ - 235GSM
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 235g / မီတာ? (7oz) မျိုးကိုရက်: 3X1Twill အကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်: 20x16 128x60 အကျယ်: 145 / 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုမှု: 60 ° C မှအရောင်မှာရေအဝတ်လျှော်ဘို့စက်မှုခဝါချမှုအိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%): အဆိုပါယူနီဖောင်းန်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့အဝတ်အစား ကြာရှည်ခံမှုကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလက်မှတ်: မာခ် 340 အရောင်များ: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
လဲမှို့ Twill ထည်ရောင်းချ - 240GSM
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 240g / မီတာ? (7oz) မျိုးကိုရက်: 3X1Twill အကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်: 16x12 96x48 အကျယ်: အဝတ်အစားဟာယူနီဖောင်းန်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့: 60 ° C မှအရောင်မှာရေအဝတ်လျှော်ဘို့စက်မှုခဝါချမှုအိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%) 145 / 150cm အသုံးပြုမှုကိုရည်ရွယ် ကြာရှည်ခံမှုကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလက်မှတ်: မာခ် 340 အရောင်များ: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
ဝါဂွမ်း twill ထည်-200GSM ရောင်းချ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 200g / မီတာ? (5.9OZ) မျိုးကိုရက်: 3X1Twill အကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်: 20x20 108x56 အကျယ်: အဝတ်အစားဟာယူနီဖောင်းန်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့: 60 ° C တွင်ရေဆေးစရာစက်မှုတာဝန်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%) 145 / 150cm အသုံးပြုမှုကိုရည်ရွယ် အရောင်ကြာရှည်ခံမှုကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလက်မှတ်: မာခ် 340 အရောင်များ: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
လဲမှို့ရိုးရိုးထည် 200GSM ရောင်းချ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 200g / မီတာ? Weave: ရိုးရိုးအကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်: 20x20 98x68 အကျယ်: 145 / 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုခြင်းကို: အယူနီဖောင်းများအတွက်အဝတ်အထည်နှင့်အိပ်ရာလိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုလက်တွေ့ features တွေ: 60 ° C မှအရောင်မှာရေအဝတ်လျှော်ဘို့စက်မှုခဝါချမှုအိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%) ကြာရှည်ခံမှုကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလက်မှတ်: မာခ် 340 အရောင်များ: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
လဲမှို့ရိုးရိုးထည် 175GSM ရောင်းချ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 175g / မီတာ? (5.15OZ) မျိုးကိုရက်: ရိုးရိုးအကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်: 16x16 ကိုယ်စားပြု 60x60 အကျယ်: အယူနီဖောင်းများအတွက်အဝတ်အထည်နှင့်အိပ်ရာလိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုလက်တွေ့ features တွေ: စက်မှုမှာရေအဝတ်လျှော်များအတွက်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%) တာဝန် 145 / 150cm အသုံးပြုမှုကိုရည်ရွယ် 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အရောင်ကြာရှည်ခံမှုကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလက်မှတ်: မာခ် 340: 2004 အရောင်များ: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
လဲမှို့ Twill ထည်-160GSM ရောင်းချ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 160g / မီတာ? (4.7OZ) မျိုးကိုရက်: 2X1Twill အကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်: 30x30 130x70 အကျယ်: အဝတ်အစားဟာယူနီဖောင်းန်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့: 60 ° C တွင်ရေဆေးစရာစက်မှုတာဝန်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%) 145 / 150cm အသုံးပြုမှုကိုရည်ရွယ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရောင်များကိုက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်စက်မှုမှတာရှည်ခံအရောင်ကြာရှည်ခံမှု: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 145g / မီတာ? (4.25OZ) မျိုးကိုရက်: ရိုးရိုးအကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်: 20x20 60x60 အကျယ်: အယူနီဖောင်းများအတွက်အဝတ်အထည်နှင့်အိပ်ရာလိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုလက်တွေ့ features တွေ: စက်မှုမှာရေအဝတ်လျှော်များအတွက်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%) တာဝန် 145 / 150cm အသုံးပြုမှုကိုရည်ရွယ် 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကိုက်ဖြတ်ရန်တာရှည်ခံအရောင်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရောင်များ: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ